Manandriana – Ambatofinandrahana: fahazoan-dalana lany andro nitondrana vato malakita 27 t | NewsMada
Manandriana – Ambatofinandrahana: fahazoan-dalana lany andro nitondrana vato malakita 27 t
Nozahan’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ravokatra Fidiniavo, ny toerana nametrahana ireo vato malakita 27 t tratra tany Manandriana, distrikan’Ambatofinandrahana, ny herinandro lasa teo. Nahatratrarana izany vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny polisin’ny Harena an-kibon’ny tany, sy ny zandary. Kamio roa nitondrana ireo vato ireo, saika nentina nivoaka ny faritra amina fahazoan-dalana roa efa lany andro.
Nilaza ny minisitra Ravokatra Fidiniavo fa miezaka andro aman’alina ny minisitera iadidiany hamerina amin’ny laoniny ny fanarahan-dalàna manomboka amin’ny fitrandrahana hatrany amin’ny fivarotana ireo harena an-kibon’ny tany isan-karazany amin’ny maha zava-dehibe ny vina IEM (lnitiative pour l’Emergence de Madagascar), nofaritan’ny filohan’ny Repoblika. Tanjona, tokony hampiakatra ny toekarem-pirenena sy hahitan’ny vahoaka malagasy tombontsoa.
Karazam-bato indostrialy ny malakita, miloko maitso, fanao haingom-pitaovana ao an-tokantrano, indrindra entina manatsara endrika ny fiangonana, efitrano lehibe fandraisam-bahiny na fivoriana, nanomboka tany amin’ny taonjato faha-17, any amin’ny firenen-dehibe maro. Ohatra, any Saint Petersbourg, Rosia, 16 t amin’io malakita io ny nampihaingoana ny katedraly Md Isaac.